दीपाश्री निरौलाको हुनै लागेको विबाह यसकारण रोकीएको रहेछ, भन्छिन्: ‘त्यसपछि विबाहको लगन नै जुरेन’
Homeसमाचारदीपाश्री निरौलाको हुनै लागेको विबाह यसकारण रोकीएको रहेछ, भन्छिन्: ‘त्यसपछि विबाहको लगन नै जुरेन’
February 8, 2021 admin समाचार 6446
दीपाश्री निरौलाले रोजै सा’मना गर्नुपर्ने प्रश्न हो– विवाह कहिले गर्नुहुन्छ ? उनी प्रायः हाँसेर टारि’दिन्छिन् । उनले पहिला पहिला विवाह गर्ने चाहना भए पनि तत्काल विवाहका बारेमा सोच नब’नाएको उनले बताइन् ।
आफू क्यारियर तिर फोकस्ड भएकाले त्य’सतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताइन् तर, मुहारमा मुस्कान देखिने यो क्षण दि’मागमा भने एउटा पुरुषको तस्बिर नाच्ने गर्छ, जसलाई उनले ‘धो’का’ दिएकी थिइन् ।
त्यो पनि विवा’हकै दिन । यो अधुरो प्रेमकथा सुरु हुन्छ, विसं. २०४८ तिर । त्यतिबेला दीपा १० कक्षामा पढ्दै थिइन् । विराटनगरस्थित उनको घरअगा’डि कलेज पढ्ने केटो भाडा लिएर बसेको थियो । पढाइमा नामी,आनी’बानी पनि सरल ।
टेस्ट परीक्षा नजिक आउँदै थियो, दीपा उनी’सँग पढ्न जान थालिन् । अरू साथीहरू पनि हुन्थे तर उनको ध्यान दीपातिर ज्या’दा हुन्थ्यो । यसको हेक्का दीपालाई नभएको होइन तर थाहा न’पाएझैं गरिन् ।
शंका ला’गेर हो वा कुन्नि, एक दिन आमाले किताब खान’तलासी गरिछिन् । त्यहाँ त त्यही केटाले ले’खेको प्रेमपत्र । दीपा मुस्कुराइन्, ‘मलाई थाहै थिएन तर आमाले पूरै बबन्डर मच्चाउनुभयो । आमा र फुपूको पिटा’इ खाइयो ।
उनी केटाले ए’कोहोरो मन पराएको विश्वास दि’लाउन खोज्थिन् तर आमा मरिगए नप’त्याउने । आमालाई डर रहेछ, छोरीले इसारा नदिई केटाले चिठी लेखेन,त्यसैले दिनरात गाली गरिरहिन्,कहिले रुँदै घुर्काउँ’थिन पनि । भिडियो हेर्नुहोस
सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कसरी कारोबार हुँदैछ त हेर्नुहोस्
अदुवा हालेको चिया पिउँदाका फाइदा यस्ता छन् हेर्नुहोस्
घ’ट्न थाल्यो कुखुराको मा’सुको मूल्य
May 21, 2021 admin समाचार 5178
बजारमा कुखु’राको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न था’लेको छ । एक महि’नाअघि प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा एक सय रुपैयाँ’भन्दा बढी घटेको हो । अहिले बजारमा प्रति’किलो ३३० देखि
खाने तेलको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म ब’ढाइयो
May 9, 2021 admin समाचार 5318
निषेधाज्ञाको बहानामा उद्योगी र थोक व्यापारीले खाद्य सामाग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । उपभोक्ताबाट आफूखुशी मूल्य लिन कृत्रिम अभाव खडा गरिएको हो । उद्योगी र थोक व्यापारीले खानेतेलमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर
अनमोलकी प्रेमिकाले के भनिन त्यस्तो ? चल्यो चर्चा माथि चर्चा आज्ञाले लेखिन मन छुने स्टा’टस
April 4, 2021 admin समाचार 5605
फिल्म क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ वि’भिन्न गसिप बन्ने गर्छन । कलाकारहरु गसिपको कारण चर्चामा आउँछन् । कतिपय गसि’प सहि सावित हुन्छन् भने कतिपय गसिपमै सिमित हुन्छन् । अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायक अनमोल केसीको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241717)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229688)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229294)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228326)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227641)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227279)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226498)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226069)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194102)